Trump ayaa ugu baaqay Bangiga dhexe dhibaatada hoos u dhaca dhaqaalaha Maraykanka; suuqyadu – Walaal24 Newss
Trump ayaa ugu baaqay Bangiga dhexe dhibaatada hoos u dhaca dhaqaalaha Maraykanka; suuqyadu
December 25, 2018	1	By walaal24
Madaxwaynaha Donald Trump ayaa ku dhawaaqay isbahaysiga Federaalka ee Isniinta, isaga oo ku tilmaamay “dhibaatada kaliya” ee dhaqaalaha Maraykanka, iyada oo saraakiisha sar sare ay ku kulmeen si ay ugala hadlaan jadwalka sii kordhaya ee suuqyada saamiyada ay sababtay in qayb ka ah weerarrada madaxweynaha ee bangiga dhexe.
Duufaanta ayaa mar kale ku dhuftey Isniintii iyadoo ay jirto walaac ku saabsan hoos udhaca kobaca dhaqaalaha, xiritaanka xukuumadda iyo warar sheegaya in Trump ayaa ka wada hadlay xiritaanka guddoomiyaha Federal Reserve Jerome Powell, oo uu si joogta ah u dhaleeceeyay kor u qaadista dulsaarka.
Saamiyada Maraykanka ayaa si xoog leh hoos u dhacay todobaadyadii dhawaa iyada oo laga walwalsan yahay koritaanka dhaqaale ee liita. S & P 500 index <.SPX> wuxuu ahaa heerkii ugu badnaa ee hoos u dhacey bishii Disembar tan iyo intii uu socday Digniintii weynaa.
Wargeyska oo aan waxba ka qaban karin welwelka suuqa ee ku saabsan madaxbanaanida madaxbanaan ee Fed, Madaxweynaha Jamhuuriga ayaa ku eedeeyay madaxa dhaqaalaha inuu si caddaalad ah ugu fadhiyo cagaha bangiga dhexe.
“Dhibaatada kaliya ee dhaqaaleheenu waa Fed, mana haysan dareen suuq ah,” ayuu Trump ku sheegay Twitter. “Fed wuxuu u eg yahay kubad xoogan oo aan awoodi karin sababtoo ah ma uusan taaban – ma uusan dhicin!”
Intaa waxaa dheer, in si joogta ah loo dhaleeceynayo fedriska ee sanadkan, Trump ayaa ka tagay Powell dhowr jeer, isaga oo u sheegay Reuters bishii August inuu “ku faraxsanayn” doorkiisa gaarka ah. Qiimaha dulsaarka ee Fed ayaa mar kale la soo dhaafay todobaadkii hore, sida la filayay.
Dhibaato Isniinta ah oo u dhexeeya xayiraadaha dhaqaalaha Maraykanka iyo Waaxda Maaliyadda ayaa wax badan ka qaban jirtey suuqyada marka loo eego si loo hubiyo.
Dhammaan sadexda majaal ee waawayn waxay hoos u dhaceen in ka badan 2 boqolkiiba maalinta ka horeysa fasaxa kirismaska. S & P 500 ayaa hoos u dhacay ilaa 19.8% laga bilaabo Sibtember 20aad ee xidhitaanka sare, oo xishoodka ah ee 20% qiimaha guud ee qeexaya suuqa xayawaanka.
Qiimaha saliidda ayaa hoos udhacay saamiga, isagoo hoos u dhigaya in ka badan 6 boqolkiiba heerka ugu hooseeya sanadka.
Xoghayaha Wasaaradda Maaliyadda Steven Mnuchin ayaa martigeliyay wicitaan uu la yeeshay Guddiga Wadashaqeynta Madaxtooyada ee Suuqyada Maaliyadeed, oo ah qaab jir ah oo loo yaqaano “Protection of the Plunge”, oo caadiyan la qabsado wakhtiyadii isbeddelka suuqa ee culus.
Xeer-ilaaliyeyaasha ayaa sheegay in aysan wax ka arkeynin suuqyada lacageed ee caadiga ah intii lagu jiray iibinta dhowaan sidoo kale waxay ka wada hadleen sida ay u sii wadi doonaan hawlgallada muhiimka ah inta lagu jiro xiritaanka xukuumadda qayb ahaan, sida ay sheegeen laba ilo xog ogaansho ah.
Axaddii, Mnuchin ayaa wicitaanada ugu baaqday baananka sare ee Maraykanka, isla markaana ay u xaqiijiyeen in bangiyada ay wali awoodaan inay deyn u sameeyaan, ayay tidhi Treasury.
MARKOO AAD KA BEDELAYO
Haddii dadaalada Mnuchin loogu talagalay in lagu dhiiri geliyo suuqyada, taasi ma muuqato Isniinta.
“Marka Dowladdu hoos u dhigto 600 dhibcood, way adag tahay in la yiraahdo waa wax wanaagsan,” ayuu yiri J.J. Kinahan, istiraatiijiyadda suuqa suuqa ee TD Ameritrade ee Chicago. “Inkastoo uu doonayo inuu ahaa mid aad u wanaagsan, dareemka saafiga ah ee aan u maleynayo inuu ahaa, ‘Ma waxaa jira dhibaato weyn oo aanan ogeyn?”
Wakiilka Maxine Waters, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Golaha Wakiilada Adeegga Maaliyadda, ayaa sheegay in falka ‘Trump’ iyo ‘Mnuchin’ ay yihiin kuwo qalad ah isla markaana abuuraya hubin la’aan iyo xasillooni darro suuqyada.
Wall Street ayaa si dhow ula socota warar sheegaya in Trump uu si gaar ah ugala hadlay suurtagalnimada in uu xakameeyo Powell, oo noqday hoggaamiyaha FED horaantii bishii Febraayo markii uu magacaabay Trump oo uu sii waday wadada tartiib tartiib tartiib ah oo uu bilowday Janet Yellen.
Mnuchin ayaa Sabtidii sheegay in Trump uu u sheegay inuusan waligiis soo jeedin in uu tuuro “Powell. Hase yeeshee, dadwaynuhu waxay soo jeedinayaan in Trump ay isku dayi karto inay si feejigan u faragaliso Fed oo ku fashilantay suuqyada maaliyadeed oo muddo dheer ka shaqeynayey sidii loo qadarin lahaa madaxbannaanida bangiga dhexe ee Maraykanka ka soo horjeedka siyaasadeed.
Isku-daba-gelinta dhibaatada waa la’aanta caddaynta in Trump ay dhab ahaantii iska dhaafi karto Powell.
Sarah Binder, oo ah borofisar cilmiga siyaasadda ee Jaamacadda George Washington, ayaa sheegay in ay ahayd “sharci ahaan aan sharci ahayn” haddii ay Trump ka saari karto Powell doorka gudoomiyaha.
Xeerka Badbaadada Federaalka wuxuu cadeeyay in Powell kaliya laga saari karo guddiga Fedaraalka ee guddoomiyeyaasha “sabab,” taas oo guud ahaan la fahamsan yahay in ay tahay macquul ma’aha, halkii ay ka soo horjeedaan dulsaarka dulsaarka, ayuu yiri Binder.
Laakiin waxa laga yaabaa inay sharci ahaan u tahay Trump si looga saaro Powell doorka guddoomiyaha, ayuu yiri Binder. Markii shirweynihii ugu danbeeyay wax laga bedelay xeerka 1977, ma aysan sheegin in ka saarista guddoomiye waa inuu yahay “sabab,” ayay tiri.
Dhibaatooyinka ka jira Washington ayaa sii kordhaya maalmihii la soo dhaafay iyada oo la xidhay xayiraad dawladeed oo ka bilaabatay Sabtidii ka dib markii ay ka soo horjeedeen Kongareeska dhaqaale ee derbi ku yaal xudduudda Mexico. Xoghayaha Difaaca Jim Mattis ayaa is casilay Khamiistii ka dib markii Trump uu go’aansaday in Maraykanku ka saaro Suuriya sidoo kale maalgashadayaasha aan hagaagin.
Laakiin Jawaabta Mnuchin ee ku saabsan arimaha suuqyada waxaa loo arkaa inay tahay mid aan ka badneyn wareegyada Wall Street.
“Waxay u egtahay mid aan la fileyn, isdaba-joog ah oo aan loo baahneyn,” ayuu yiri Mich
Klopp ayaa doonaya ciyaartoydiisa Liverpool in ay ka caroodaan “caro” iyo “hunguri”
Ciidamada Xooga Dalka oo Al-shabaab ku dilay agagaarka Degmada Baardheere ee Gobolka Gedo
Faah faahin ka soo baxaysa Qaraxyadii xalay ka dhacay maglada Muqdisho